The itsva zviri Ankai kutora kurwadziwa - China Shandong New Ankai-Kitco
Swiss CNC lathe dzakatevedzana
Horizontal Yokuchinja CNC Lathe Series
Vertical hwokugaya hwakabvira CNC Lathe Series
The itsva zviri Ankai kutora marwadzo
New chinhu: itsva Ankai Ankai kutora marwadzo kutora nemarwadzo NC okusuma vanorumwe zvigadzirwa, kushandisa pagadzirwe mukuru-mugumo CNC machine zvigadzirwa kuenda, mukuru Rigidity, kutsiga zvakanaka
1, High Rigidity: yose muchina iri zvishoma kunorema, riri dziri mumuviri kuraswa rusvingo ukobvu, nguva yokurarama mutungamiriri njanji, etc. ari Rigidity uye expansibility pamusoro muchina chokushandisa vari simba, rinorema nokuveza mukuru mumwe muchina Ezvemutauro , uye ane mikana pachena kugadzirisa simbi, chiwanikwa simbi, Stainless simbi zvinhu uye zvichingodaro.
2, mukuru pakusimba: mutungamiriri uye span wakashamira, chikuru akamedura / countershaft pashure Indexing nokukiya mudziyo, anovandudza kugadzikana workpiece.
3. The FANUC - dzakatevedzana dziri lateral guru chokushandisa injini uye kufudza injini ndiye mukuru Beta akatevedzana.
1) Arifa akatevedzana ndiyo inonyanya FANUC injini, uye ayo zvakarurama, kuita uye upenyu kupfuura Beta akatevedzana.
2) hapana tembiricha kuonekwa ari Beta akatevedzana injini. Injini uye hurongwa richakanganisika apo tembiricha iri injini kunowedzera ichi- kana mutoro riri kuramba kana mutoro wakakura.
3) hwatine mugodhi, servo gudzazwi uchishandisa Alpha yakatevedzana (FANUC, pamwe soro) uye chokurukisa, transverse gudzazwi iri akatsemura, Beta dzakatevedzana upfumi mhando gudzazwi, mutengo dererei pane Arufa series, uye mukuru mugodhi, transverse gudzazwi chinhu chakakosha mufananidzo, mukupera kuvariritira uye pakutsiva yose yokutsiva nokuchengetedza mari inofanira kupfuura Beta akatevedzana kambani yedu vakapakata Alpha injini SM205. The torque of Arifa injini, nemagadzirirwo pakati inofambiswa, chisarudzo pamusoro encoder, uye ano vasabatwa vakasimba zvikuru kupfuura Beta injini.
4, kumhanya, mukuru nemazvo uye yakakwirira kunyatsoshanda: yakanakisisa chishandiso marongerwo inotongwa kumhanya svomhu oparesheni, saka kuti chokushandisa kuchinja nguva ndiyo uye yakanakisisa nzvimbo kunoitwa panguva imwecheteyo, uye ebetsero nguva ipfupi kuti pfupi.
5, mukuru configuration: kupfuura kuramba dzichipfekeka izvo wakashamira kubudiswa kukura kwazvo uye akasangana kunzwisisa machine kunzwisisa zvikamu zvinoriumba, Multi akabatana akapfuma chokushandisa configuration, uye mwero yemagetsi,.
6, yakakunakira kuvhiyiwa nzvimbo: yakakunakira kuvhiyiwa nzvimbo, nyore kuchinja banga, kutwasuka rigone chishandiso kuwana zvakanakisisa chip.
7, yakakwirira mukana wokushandiswa: inogona akaziva kana pasina richitungamirira the bushing zvakafanana, yemagetsi zvinogona vakagadzirira anokurumidza kuchinja shinda chamupupuri azvikuya, simba musoro, VDI wemiti, Chip remover, mafuta mhute muteresi, waya extrusion vhiri, mukuru kumanikidzwa pombi nezvimwe namano.
Post nguva: May-02-2018
Chii chakanakira Swiss CNC Machine ...
Sei duku kusanganiswa kudzora kufamba M ...
The itsva CNC machine mudziyo mabhizimisi Network ...
The itsva SC385 SM203 muchina, Ankai Succes ...
The Ford Logo uye Bronco zita vari pfuma yaJehovha Ford Motor Company. Classic Ford Broncos haina chokuita Ford Motor Company.